Jessica Alba, Sheryl Crow, Dierks Bentley, Gwyneth Paltrow, and will.i.am xiddigga Carpool Karaoke | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad Carpool Karaoke Iyadoo dhowr ogeysiis oo dheeri ah ay toos uga imaaneyso kanaalka Apple ee Youtube. Xaaladdan oo kale, boodhadh xiiso leh ayaa u muuqda qaybaha cusub ee laga sii deyn doono Apple Music maalmaha soo socda.
Shaki la'aan, boodhadhka ay Apple na tusayso marba marka ka dambeysa barnaamijyadeeda cusub waa kuwo raaxo leh waxaanan la galnay magacyo muhiim ah xagga muusigga, filimka iyo warbaahinta. Xaaladdan oo kale waxaan haynaa: Sheryl Crow iyo Dierks BentleyDhinac iyo dhinaca kale waxaannu leenahay seddex raaxo: Jessica Alba, Gwyneth Paltrow iyo will.i.am.
Xayeysiintan cusub ee ay Apple u soo saartay taxanaha Carpool Karaoke, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow iyo will.i.am ayaa soo muuqan doona, heesida iyo ku raaxeysiga hada gawaarida caadiga ah.
Qeybtan kale iyo xayeysiinta labaad ee la sii daayay dhowr saacadood ka hor, waxaan ku arki karnaa heesaaha Mareykanka, heesaaga, guitarist, muusikiiste iyo atariishada Sheryl Crow, oo ay weheliyaan heesaag kale oo caan ah oo Mareykan ah, laakiin kiiskan nooca waddanka ah, Dierks Bentley:
Waxaan si cad u aragnaa in ballanqaadkii Apple ee noocan ah barnaamijku uu sii socdo oo aanu joogsanayn dadaalka uu ugu jiro inuu ku sii socdo mashruucan. Dhowr shirkadood oo wax soo saar oo Hollywood ah ayaa kala xaajoon lahaa wiilasha Cupertino in lagu daro barnaamij cusub waxaana la filayaa in tani ay ku sii kordheyso waqtiga ka dib. Apple waxay iibsatay qaabkan bartamihii-2016, soo-jeediyaha waa James Corden, waxayna umuuqataa in ka dib bilowga Ogosto 8, qeybihi ugu horreeyay ay aad u xiiso badan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Jessica Alba, Sheryl Crow, Dierks Bentley, Gwyneth Paltrow, iyo will.i.am oo xiddig ka noqon doona Carpool Karaoke
MacBook Pros oo leh 32Gb oo RAM ah ma imaan doono illaa 2018, sababtoo ah xaddidnaanta processor-yada Intel